Ipharamitha yobuchwephesha ● Isantya: i-0.1 ukuya kwi-100 rpm, ibuyela umva ● Ukuchaneka kwesantya: i-0.1 rpm ● Ukulawula isantya: Inwebu yekhiphedi cw (ukukhanya okuluhlaza) / ccw (ukukhanya okuluhlaza) ulawulo ● Umboniso: Iimpawu ze-LED ezinemivo emi-3 zibonisa i-rpm yangoku ● Ulawulo lwangaphandle: Qalisa / misa, cw / ccw ulawulo kunye nolawulo lwesantya 0-5 V / 10 V, 4-20 mA kunye 0-10KHz ● Unxibelelwano lonxibelelwano: RS485 ● Ukunikezelwa kwamandla: AC 90V-260 V 50/60 Hz ● Ukusetyenziswa kwamandla: ≤30 W ● Imeko yokusebenza: Ubushushu kwi-0 ukuya kwi-40 ℃, Ukufuma okunxulumene <80% ● Ukuqhuba ubunzima: 2 ....
I-MP Series Impompo encinci yempompo yincinci encinci, ukuchaneka okuphezulu, uthotho lweemveliso zobomi obude. Ngokusisiseko izixhobo kunye nezixhobo ezifanayo nesicelo. Inokudlulisa ulwelo olungaphantsi kwe-5ml. Abasebenzisi banokuqhuba imoto yokunyathela ukuyilawula, okanye ukhethe omnye umqhubi. Zimbini iintlobo zokuqhuba onokukhetha kuzo: i-12.5-QD1 Ngaphandle kwe-rotor etshixwayo (uluhlu lwesantya: 0.75-450rpm) 12.5-QD2 nge-lock-rotor (uluhlu lwesantya: 90-450rpm) Ezi modeli zimbini zine-Electromagnetic valve drive interface, ine-RS485 commu ...
Eyilelwe izicelo zokucoceka okuphezulu, i-Huiyu Silicone Tubing ye-ultra-bore bore yangaphakathi inokunciphisa umngcipheko wokufakwa kwamasuntswana kunye nokwakhiwa kwemicroscopic ngexesha lokudluliselwa kolwelo olunobuthathaka. Uhlalutyo lwangaphakathi endlwini lwangaphakathi lweSanic Silicone Tubing ngokuthelekiswa nezinye iityhubhu zesilicone zibonisa ukuba ukuya kuthi ga kathathu ngokugudileyo. Ukongeza, le ndlela yokuhambisa amanzi egudileyo iququzelela ukucoca kwenkqubo kunye nokuzala. Isebenzisa inkqubo yokuphilisa iplatinam, i-Huiyu Sanitary Silicone Tu ...
Intshayelelo kunye neempawu eziphambili zeViton® fluoroelastomer hose Viton material yi-100% echanekileyo-yokusebenza okuphezulu kwerabha yokwenziwa; Ukugqwesa ubushushu obugqwesileyo: -40 ° F kuzinzo kumaqondo obushushu angama-400 ° F, amaqondo obushushu aphakathi kwi-600 ° F; Uyakwazi ukumelana nesisombululo kunye neekhemikhali ezininzi kunayo nayiphi na irabha yorhwebo; Ukunyamezeleka okugqwesileyo kweoyile ezahlukeneyo, izibaso, izinto zokuthambisa, kunye neecitamin ezininzi; IVITON ityhubhu yerabha ithumbu inokumelana ne-aliphatic kunye nevumba ...
Intshayelelo kunye neempawu eziphambili zeTygon # R-3603 izixhobo zohlalutyo lweekhemikhali ithumbu elichasayo phantse kuzo zonke izinto ezisetyenziswa rhoqo kwiikhemikhali zelabhoratri ezingaphiliyo; Ithambile, iyabonakala, kwaye kulula ukuyigugisa, ukuqinisa umoya kunetyhubhu yerabha; Ukuxhathisa okuhle kobushushu obuphantsi, ukuze kusetyenziswe -43 ℃ kugcinwe ukuguquguquka; Ingasetyenziswa njenge-condenser, i-incubators, i-trachea, kunye nenye ithumbu lokucoca elebhu kunye ne-peristaltic pump tubing. Ukucaciswa kwenombolo yetyhubhu ye-ID (mm) yeDonga ...
Intshayelelo kunye neempawu eziphambili ze-PharMed® peristaltic pump hose ingredients, uphando lweeseli ngokusetyenziswa kwexesha elide kwimpompo ye-peristaltic, ubomi obude kune-silicone tube amaxesha angama-30; Unokuphindaphinda inzalo ye-autoclave; Ngokuhambelana ne-United States USP Class VI, imigangatho ye-FDA kunye ne-NSF; Ukungahambelani kwayo kwimigangatho ye-ISO10993; Ukuqina amaxesha angama-60 omelele kune-silicone tubing. Ukucaciswa kweNombolo ye-Tube yenombolo ye-Tube (mm) ubukhulu be-Wall (mm)
Intshayelelo kunye neempawu eziphambili ze-Norprene®Chemical hose Inokuchasana kweekhemikhali kunye nobomi benkonzo ende iTefon eludongeni lwangaphakathi lwezinto zombhobho, umphezulu ogudileyo, ongenaziplastiki, i-anti-liquid adsorption, akukho ukufakwa; Uluhlu lwangaphandle lwezinto ezinxibe ixesha elide zokunxiba, zilungele iiasidi, ialkali, utywala, iiketoni kunye nokunye ukuhanjiswa kolwelo. Ukucaciswa kweNombolo yetyhubhu ye-ID yenombolo (mm) ubukhulu be-Wall (mm) Impompo efanelekileyo Mpompo M / Iphakheji yeNorprene®Chemical 16 # ...
Intshayelelo kunye neempawu eziphambili zeFluran®F-5500-Umbhobho owomeleleyo wokubamba umhlwa; Ukuxhathisa kuninzi lweasidi, iialkali, izibaso, izinyibilikisi eziphilayo; Ukusetyenziswa kwexesha elide kwindawo ephezulu engama-204 ℃; Iyamelana kakhulu ne-ozone kunye nokumelana nemozulu; luthambe, ubhetyebhetye obugqwesileyo, ilungele ukuhambisa imithombo yeendaba enobungozi kunye ne-peristaltic pump tubing. Ukucaciswa kweNqaku leNombolo ye-Tube ID (mm) ubukhulu be-Wall (mm) Intloko yempompo efanelekileyo M / iphakheji yeFluran®F-5500-A 16 # 3.1 ...
Izinto zeetyhubhu ezidibeneyo zePolypropylene edibeneyo (PP): Ukumelana kakuhle kweekhemikhali, ubushushu obusebenzayo -17 ℃, 135 ℃, kwaye inokubulawa ngentsholongwane nge-ethylene oxide okanye kwi-autoclave. Ubume bombhobho odibeneyo wobume obuchanekileyo "Y" ubume, uhlobo lokunciphisa ityhubhu yokudibanisa ityhubhu kunye ne-tubing efanelekileyo Ububanzi obungaphakathi Ubulungeleyo i-tubing (intshi) (mm) 1/16 ″ 1.6 13 # 14 # 1/8 ″ 3.2 16 # 3/16 ″ 4.8 15 # 25 # 1/4 ″ 6.4 17 # 24 # 3/8 ...
I-Footswitch JK-1A, i-JK-2K, i-JK-3A, i-JK-4A yechungechunge lokutshintsha kweenyawo lahlulwe laba yimowudi yokulawula inqanaba kunye nemowudi yolawulo yokubetha. Inokulawulwa ngokunyathela okanye ukunyathela ukulawula isekethe, endaweni yokusebenza kwempompo ye-peristaltic okanye impompo yesirinji ngesandla. Inokukhulula izandla zomsebenzisi ukuba zenze olunye uphando.
Ukuzalisa umlomo kunye neCounter Sunk
I-anti-adsorption head countersunk Intloko yintsimbi engenasici, edityaniswe kwindawo yokuphuma ityhubhu ukukhusela ityhubhu yokumpompa ekutyibilikeni okanye ekufunxeni eludongeni lwesikhongozeli, ukuze ulwelo lutywe ngokupheleleyo, kuqinisekiswe uzinzo kunye nokuchaneka kokuhambisa . Ukulungelelanisa iipompo ezahlukeneyo zepompo ye-peristaltic kwaye unokwenziwa ngeenaliti ezingenazintsimbi zokuzalisa inaliti Isetyenziselwa kakhulu ekuphumeni kwethumbu ukuzaliswa kwamanani kunye nokuhanjiswa okuzinzileyo ukukhusela ...
Imodyuli yoLawulo lwangaphandle
Impompo efanelekileyo ye-5 indlela yolawulo lwangaphambili ye-WT600F-1A BT100L-1A BT100J-1A BT100F-1A BT300J-1A BT300F-1A BT600-2J WT600J-2A 0-5V uphawu lwe-analog 0-10V uphawu lwe-analog 4-20mA uphawu lwe-analog 0-20hz Unxibelelwano lwe-RS485